फ्ल्यासको साथ रमाईलो Martech Zone
मङ्गलबार, डिसेम्बर 19, 2006 मङ्गलबार, अक्टोबर 4, 2011 Douglas Karr
काम अहिले धेरै व्यस्त छ र म पहिले नै केही सफ्टवेयर रिलिजका लागि आवश्यकताहरूको निर्माणमा पछाडि छु। नतिजाको रूपमा, मसँग आज र रातको बारेमा ब्लगमा धेरै छैन, त्यसैले मैले फ्ल्यास फाइलको साथ खेलें जुन मैले एक साथीबाट लिएको छु र यसलाई मेरो ब्लगको लागि अनुकूलित गर्छु। आशा छ तपाईंलाई यो मनपर्‍यो!
यो छुट्टीको भावनामा प्रवेश गर्ने समय हो! यदि तपाईं यसको लागि मूल फाइलको प्रतिलिपि चाहानुहुन्छ भने, यहाँ तिमी जाऊ! मेरो अविश्वसनीय प्रतिभाशाली मित्रलाई विशेष धन्यवाद, माइकल, मूल फ्ल्यास फाइल साझा गर्न को लागी!